1. Famolavolana sarontava malefaka vaovao. Famelombelona ambony sy famaritana avo.
2. IP65 tsy misy rano, izay tantera-drano avo lenta, vovoka ary anti-harafesina.
3. Afaka miasa tsara amin'ny karazana toetrandro mavesatra any ivelany izy, ary mety amin'ny gymnasium any anaty trano ihany koa.
4. Ireo takelaka dia manana endrika tsy manam-paharoa azo zahana Angle, izay azo ahitsy amin'ny tontonana samihafa Angle (75 ° ~ 90 °) araky ny fampiasan'ny anjely ny fepetra takiana, avelao ny mpihaino rehetra hahita ny atin'ny fampitana mivantana. Na ny fametrahana azy.
1. Fiarovana manokana tsy tantera-drano sy famafana ny hafanana, azo apetraka amin'ny faritra anaty sy ivelany. Haavo IP fiarovana avo lenta IP65 manome antoka Output avo lenta na ahoana na ahoana.
2. Kilasy fiarovana indostrialy, porofo feno vovoka IP65 ary tantera-drano.
Ny fampiratiana dia mitazona akorandriaka IP65 tsy misy orana sy feno vovoka, fitsaboana vita amin'ny volo vita amin'ny vovoka ary fametahana tombo-kase ny vatam-paty, asa-tanana ary fanaraha-maso tsara mba hiantohana ny kalitaon'ny vokatra.
3.Samira madiodio Fametrahana azo alefa
Ny fizarazaran-tsarimihetsika tsy misy fotony sy tsy misy rafitra, elanelana azo ovaina, fametrahana malemy. Ny teknolojia fanitarana horonantsary dia azo ampiasaina amin'ny habe rehetra mba hahazoana antoka fa tsy simba ny sary ary mazava sy mazava ny sary.
● Teknolojia SMD
● Fijery malalaka (140 * / 140 °)
● Fifanarahana avo lenta
● IP65 tsy misy rano
● Miasa mafy ho an'ny any ivelany
Warranty sy serivisy
Tsy toy ny ankamaroan'ny orinasa, izahay eto Everyinled dia eto mba hahazoana antoka fa voasarona ny fampirantianao rehefa tena ilainao izany. Manarona ny takelaka ataonay avy any amin'ny sisiny ka hatrany amin'ny sisiny, pixel ka hatramin'ny pixel ao anatin'izany ny lafiny rehetra amin'ny tile LED. Ny LED tsirairay avy dia manome alalana ny vokatray rehetra mandritra ny 3. 5 taona ho an'ny mpividy tany am-boalohany, mba tsy hisy kilema amin'ny famolavolana sy ny fitaovana ampiasaina amin'ny ara-dalàna araka izay kasain'ny Everyinled mandritra ny fotoana fiantohana manontolo.
238sqm P10 Football Stadium LED efijery any Ivory Coast
Teo aloha: P6.67 Fampisehoana LED any ivelany